Sida loo xakameeyo taageerayaasha iMac barnaamijyada | Waxaan ka socdaa mac
Sida loo xakameeyo taageerayaasha iMac barnaamijyo
Peter Rhodes | | iMac, Kombiyuutarada Mac
Isticmaalayaal badan ayaa qaata murugada waxayna go'aansadaan inay beddelaan iMac-kooda adag ee gudaha, haddii ay yihiin moodooyinka cusub ee caato ah ama aluminiumkeenna qaaliga ah ee iMac iyo DVD burner. Si kastaba ha noqotee, maahan dhamaan tillaabooyinka ay tahay in la raaco kuwo cad waxaana jira moodello iMac ah oo leh dareemayaal xogta u dira processor-ka si ay si sax ah u maamusho taageerayaasha in mashiinku u haysto heerkulka ku habboon.
Apple, bilawgeeda, waxay siisay qaar badan oo ka mid ah iMac dareemayaal heerkulka ah oo lagu rakibay dusha sare ee rugaha adag ee lagu soo daray iMac, sida haddii aad bedesho drive-ka adag nooc ka duwan kuwii ay Apple laftiisu isku soo dubariday kumbuyuutarka ayaa si otomaatig ah marwalba u daara taageerayaasha.
Goor dambe, imaatinka cusub iMac oo leh gees khafiif ah oo horeyba loo cusbooneysiiyay dhowr jeer illaa laga gaaro moodooyinka leh muuqaalka 'Retina bandhigay', ku darista dareeraha heerkulka ayaa laga tagay si markaa kumbuyuutarradan aan horeyba isbeddel ugu sameyn karno ee disk-ka gudaha ah HHD ama SSD adigoon wax dhibaato ah kala kulmin taageerayaasha.
Hadda, haddii iMac-ka aad rabto inaad ku cusbooneysiiso SSD tusaale ahaan inaad yeelato waxqabad sare, waa inaad tixgelisaa taas waa inaad ku xakameysaa taageerayaasha barnaamijka maaddaama maqaayadaha aan hadda la siinaynin dareemayaasha heerkulka ee aan kuu sheegnay ama ay adag tahay in la helo.
Mar alla markii aad beddesho diskiga adag, waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad sameyso markii aad bilawdo iMac markale waa inaad ka raadsato internetka arjiga lagama maarmaanka u ah inaad ku rakibto sidaasna aad ku haysato maamule disk adag sida haddii ay tahay dareemayaal heerkulka jirka ah. Codsiga laftiisa waxaa loo yaqaan 'SSD Fan Control' waana awoodaa ku soo dejiso bilaash websaydhka soo socda.
Markaad soo dejiso, waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso ayaa ah inaad rakibto oo markii aad socodsiiso markii ugu horeysay dooro SMART qaabka shaqada si ay si otomaatig ah u shaqeyso oo ay kaligeed ku bilaabato xakamaynta taageerayaasha isla waqtiga aad daarto iMac. Sidaas darteed, waxaad yeelan doontaa gacanta software ee hawlgalka ee taageerayaasha aad Mac iyo sidaas awood u yeelan doonaan in ay isticmaalaan nooc kasta oo ka mid ah darawal saddexaad xisbiga adag.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » Sida loo xakameeyo taageerayaasha iMac barnaamijyo
Shaki la aan kan ugu fiican ee aan ugu isticmaalo barnaamijkayga 'iMac 2011' ssd waana raaxo !! Waxaan rajeynayaa inay taageero u hayso macOS Sierra !!!
Jawaab ku bixi Matias Torchia
Shaki la'aan, waxaan si fiican ugu isticmaalaa iMac-kayga 2011-ka oo aan la socdo SSD !! waxaan rajeynayaa in taageero lasiiyo macOS Sierra!
Galab wanaagsan Pedro. Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado inaad i caawin karto iyo in kale. Waxaan ku rakibay SSD Fan Control, tan iyo markii aan badalo drive-ka adag ee SSD-ka ah oo ah 2009 iMac taageerayaashu ma joojinayaan.
Nidaamka qalliinka waa SIERRA
Dhibaatada i haysata ayaa ah ikhtiyaarka SMART ee aad ka faallooto ma muuqdo oo sidoo kale wuxuu ka muuqanayaa sawirka barnaamijka.
Ma ogtahay sababta ay noqon karto?
Waad salaaman tihiin Fernando, sidee buu ku yimaadaa, ma ka soo degsatay bogga rasmiga ah?
HELLO PEDRO, WAAN KU BADALAY HDD SSD, WAANNA HADAAD AH FANSANAYAASHA COD DHAQA LEH, AYAAN SOO BANDHIGAY KONTOROOLKA FANKA EE SSD, LAAKIIS MA OGAO IN AY SAMEEYSO WAX KASTA, TAAGEERAYAASHA AY RAACAYAAN QAADO KASTA, XATAA IN AY TAHAY DIIWAANKA AAN ISBADALKA JOOJI). WAXAAN LEEYAHAY BMI BANKA 2011 IYO OS SIIRRA SARE, MAXAAN SAMAYN KARAA, MAHADSANIDIIN.
Codsi heer sare ah oo loogu talagalay kuweena baahida u qabay casriyeynta Hard Drive-ka. Waxay u shaqeysaa si qumman (smart mode) IMac 27 ″ Mid-2010 iyo High Sierra.
Waad ku mahadsan tahay Pedro
Jawaab si Luis Alberto Leiva
Aad baad u mahadsantahay Pedro Rodas, waxaan toos ugala soo degay Link-ka SSD Fan Control oo si guul ah ku dhammaaday. Madax xanuunka aad iga qaaday maba garanaysid!
Nooca ugu horreeya ee iPhone-ka wuxuu yeelan lahaa 32GB oo keyd ah oo gudaha ah